トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ General mubereko kuti wokurarama chikwereti (komisheni) uye mubereko prices
Wokurarama chikwereti mubereko uyewo rinoenderana kufarira panguva caching. Zvakajairika exchange mu zuva kushandisa nengaidzo kubva zuva rakatevera yokupedzisira musi kadhi kusvikira mwedzi anotevera mari musi, mari kuti chikwereti kuti, kwenhambo wokurarama chikwereti mubereko. Over komisheni mwero kushandisa pakuenzanisa, nemari kane mazuva 30 huwandu dzaona iri pa diem mazuva 365, chichava pamwedzi kufarira. Vazhinji kadhi makambani ave akaverenga mubereko pamusoro wokurarama nechikwereti saizvozvi. zvazvingava
chairo wepagore vanenge 15% of ano musika mutengo
basa zvazvingava, asi kusvikira yechipiri yezana 2000s yakanga yakasiyana neimwe kadhi issuer, zvino rava divi-ne-divi uye chaivo zvazvingava wepagore uri 15% . Chii kunotaurwa sezvo Premier kadhi uye Gold kadhi, waiva kuwedzera wepagore muripo yave yakaderera zviruva, akadai 11% kana 13%. Nekuti
15% ndiyo chimbadzo kufarira kushandiswa ezvinhu kuti akasara kukwereta mari rimwe gore. Kutenga zvinhu 10,000 Yen, komisheni mwero rakaiswa panguva kubhadhara mari pashure gore rimwe kuchava 15%. Kamwe vakabhadhara pashure pemwedzi mitanhatu, 7.5% kubva hafu 15% chichava komisheni unodiwa. Muende dzemaitirwe, iyo pamwedzi, iyo chimbadzo achava chokwadi kuti 1.25%.
kutenga 10,000 Yen nhumbi pa 15% of wokurarama mbiri, uye kuti atsive pashure 1 month, 1 kusvika 10,000 Yen. 125 Yen kane 25 muzana anova kufarira, muripo uwandu achava 10.125 Yen. Chete kubhadhara 125 Yen mhindu, iri kuti kuuya nokukweretesa 10,000 Yen mari. Wokurarama chikwereti kunonzi muripo nzira chaizvo chaizvo nyore mupfungwa richiti.
sezvo basa kukarukureta nzira muripo musi muenzaniso
pamwedzi 10 mazuva, kana uri yakasainwa amutsira wokurarama chikwereti pa 10,000 Yen Somuenzaniso, une kunotenga pamusoro 30,000 Yen musi July 15. zvazvingava Annual rinowanikwa pana 15%, musi waAugust mazuva 10 kwokutanga muripo musi, pamusoro 15% kusvika 30,000 Yen, kane mazuva 26 kusvika mari yakakamurwa mazuva 365 uye achava 320 Yen, 10,000 320 Yen uchava kubhadhara.
huru yave yaitwa 20,000 Yen. Zvinotevera Mwedzi September 10, yakakamurwa mazuva 365 kane 15% kusvika 20,000 Yen, vacharipa 10,000 254 Yen kuwedzerazve 254 Yen mubereko kane mazuva 31. Saizvozvowo, imi kana exchange kechitatu, ichava 10.123 Yen. Payment zvachose 30,000 697 Yen, kufarira achava 697 Yen.
The wokurarama chikwereti yakatarisa ndiko, mazana anoverengeka zviuru Yen kana kupfuura guru-tikiti zvinhu, ndozvazvakaita kuti vanoda kutenga riri dzichengeterwe ezviuru Yen mubhadharo romwedzi. Muzviitiko izvi, pasi chimbadzo kadhi anonzi zvinobetsera. Kana gore negore muripo ndiyo 10,000 Yen kana kupfuura Premier kadhi, wepagore muripo achatora, asi kufarira kushoma chakachengetwa pasi. About 11% ndiyo wegore chimbadzo ane hwezuva Premier kadhi.
Related | kukarukureta nzira wokurarama zvikwereti, kadhi simulation
wepagore muripo kuna zveefa kunyange zvishoma kufarira kubhadhara iri 10,000 Yen, ari rutapudzo mwero pfungwa 1% 1. Rava 25 muzana, uyewo vawana pfungwa huru yakanga iri kana iwe yatenga guru-tikiti zvinhu, unogona kubatsira tevera kunozvitenga. vamwe vazhinji uyewo kwemasanga vakasununguka muripo webasa, kamwe kubva wokurarama zvikwereti, uye cohesive mari kubhadhara pakarepo kana kupinda ruoko gare gare, achaponesa mubereko.
zvinhu kwete chete mumwedzi unotevera mukanyiwa-mari muripo nokuda zvikwereti chinhu zvakaoma kushandisa nyore. Kana hombe akaratidza mwedzi kubhadhara, ndiye nounyanzvi nzira kuti prepayment kana kumahombekombe.